Qormo Cajiib Ah Iyo Tilmaantii iyo Toosintii Saaxiibkay (My Senior Student).. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Qormo Cajiib Ah Iyo Tilmaantii iyo Toosintii Saaxiibkay (My Senior Student)..
Published: March 10, 2014, 10:21 am
Helitaanka qof ku tilmaama oo ku toosiya way adag tahay wakhti xaadirkan. Waxa laga yaaba inaad heshid dad badan oo maal adduunyo kugu siiya. Se, way adag tahay qof kaala hadla
noloshaada danbe iyo aayatiin ka mustaqbalka inaad si dhib yar kula kulantid. Taasina, waa nasiib.
13-08-2012 21:30 habeenimo ayaan lugta saaray diyaarad u u duulaysay waddanka Hindiya oo aan u socday inaan ka soo diyaariyo waxbarashadayda Master Degree. Wakhti ku beegan saladii subaxnimo ama 04:00am ayaan cago dhigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Mumbai. Waxay igu qadatay 30 daqiiqo in lay siiyo sharciga dal ku galka (Entry) madaama aan ahaa mar dhoof oo waraqihii ugu muhiimsanaa aan qaarkood ka imid.
Markaad u socdaalaysid dal kale waxa maskaxdaada buuxinayaa waxaas iyo waxaas kale soo baro. Waxaad sawirataa wanaag oo dhan ee dalkaasi leyahay lakiin inta badan maskaxdeenu ma sawirato caqabada aan dalkaas kala kulmi karno. Waxa inna gala hammi iyo yididiilo badan oo nafteenu xambaarto inta aynu ku gudo jirno u socdaalista waddankaa kale.
Aan ka bilaabo caqabadihii igu adkaa ee aan la kulmo. Aroortii 20-08-2012 ayaan ku kalahay jaammacada isagoo i caawinaya Maxamed Saami Koosar. Waxa i qaabishay gabadh ahayd illaa da’da 50 meeyo. Waxay igu tidhi ‘’Maanta ayaa ugu danbaysa in aad soo xaraysid dalbashadaada waxa aad donaysid inaad ku takhsuustid( Final Admission). Ku talo galkeena nololeed iyo ka waaqiciga ah ee aan la kulano ayaa marwalba aad u kala duwan. Meelna igamay jirin inay sidani dhici doonto. Balse aakhirkii waxa i cawiyay wiilkii illa socday oo ay u ogolaatay in aan laba cisho gudahood ku soo xareeyo dalbashadayda jaammacada ku biiritaankeeda.
Waxa i suurto gashay in aan ku biiro jaammacada oo aan bilaabo Master Degree. Tagistaydii koowaad ee fasalka waxa isku kay qaban wayay fikirkii aan haystay ee ahaa inaan sawirtay samuurad kuwa casriga ah iyo qashaafado casri ah in waxbarashada laygu dhigi doono iyo wixii aan fasalka dhexdiisa ugu tagay aad bay u kala duwanayeen. Se, waxa mudnaan lahaa qalabku ha iska ahaado mid duug ah ee in macalimiinta wax i dhigaysay ahayeen macalimiin aan ku dareen siinayn inaad wax ku dhiganayso fasal uu ka dhimman yahay agabkii wax lagu baran lahaa.
Waxan wajahay waxbarasho adag iyo buug ka ugu yar yahay 1000 (kun warqadood) halka qaarkood ka kobnayeen hal xiisad ama maado afar buug oo midkiiba yahay 1000 xashiyood. Waxa ku galayaa cabsi iyo dadaal badan inaad ku bixisid oo aad wakhtigaaga u hurtid waxaas oo dhan. Sidaas oo ay tahay, waddanka Hindiya waxa uu aad ugu wanaagsan yahay uguna horeeya xiisadaha dheeradka ah ee jaammacada dibadeeda laga qaato (Tuitions). Maanka iyo maskaxdayda kuwaas ayaa aad ugu weynaa marwalba oo aan ku fikiri jiray inaan qaato anoo indhaha ka lallin jiray ama wakhti yar siin jiray xataa jaammacada.
Anoo jooga wax ka yar bil ayaa waxa la shaaciyay in imtixaankii yaraa qaybtiisi koowaad (First Internal Exam) la galayo halka qaybtiisa labaad imtixaanka yarna (Second Internal Exam) la galaayo bil kale kadib isla marka kaas dhammaadana la gallaayo kii ugu danbeeyay (Final Exam).
Muddo yar kadib waxa iga socdaalay oo dalkii ku noqday walalkay Khaliif Cabdi Sheekh oo isaguna dhammaystay waxbarashadiisii jaammacadeed. Wuxuu walalo igaga tagay oo igu balamiyay inaan halkan danta aan u imid wax dhaafsiisan galin. Waxaa isaguna warqad dardaaran ah i soo diray walaalo Maxamed Cabdi Sheekh (Ilig) isagoo igu booriyay iguna gubaabiyay inaan ujeeddada iyo danta aan safarkaas dheer u galay xaqiijiyo oo waxbarashada wax dhaafsiisan aanan gelin.
Haddaba, waxaan is wajahnay nolol cusub oo aad u layaab lahayd. Waxaan bilaabay durba waxii igu weynaa ee ahaa inaan muhiimada saaro xiisadaha laga qaato jaammacada dibadeeda anoo aan wakhti badan siinayn kuwa jaammacadu bixiso. Waxaan wajahay imtixaankii koowaad ee yaraa oo ahaa mid aad igu adkaa aan dhib badan kala kulmaba habka looga shaqeeyo imtixaanka oo ahayd nidaam aad uga duwan kii aan wax ku soo bartay.
Imtixaanku wuxuu ahaa mid lagu kenaayo hal warqad oo su’aalo ku qoran yihiin iyo 8 xaashiyood oo banaan oo aad kaga jawabaysa afar su’aalood (Imtixaanka yar). Waxay igu noqotay adkaan shiyo badan madaama aan kaligay kuuliyada aan dhigto Soomaali ka ahaa. Cid i caawisa oo wax i sheegta ayaa igu adkaatay inaan helo. Dadka kale ee ajaaanibka ah waxa cuslaysay hawshooda gaarka ah oo waxay igala siman yihiin nolosha cusub.
Jaamacadda markaad ka rawaxdid ee aad guriga tagtid waxa ku sugaysa cunto karin iyo wax akhris badan. Waxa intaas qaban kara qofk ku nool guri dagan oo aan dhibaato ka jirin. Dhallinyaro badan waxay caqabad kala kulmaan markay waxbarasho dibadeed tagaan guryaha ay ku nool yihiin iyo dhallinyarada ka sii horaysay oo hadday nolosha ka dhaceen ku gubaabiya ama u diyaara dariiq ay nolosha kaga ridaan qofka cusub isaguna. Waxa badan inta dhallinyaro ah ee mustaqbal iyo nolol heer sare ah ku hammiyaysay ee afka ka gashay libaax nolosha ka dhacay oo aftahamo uu qof kale nolosha kaga ridana leh.
Haddii aad ka nabad heshid guriga aad ku nooshahay waxa badan dad kale oo wanaaga loogu daw galay oo qolo iyo qabiil iyo waxaan muhiimad badan lahayn ku mashquulsan noloshooda oo dhan. Waxaa badan oo ku wareerinaaya qaar koox koox u socda oo kugu yeedhaaya arrimo siyaasad iyo kala fogaynta dhallinyarada u timid waxbarashada. In laysku dubnaado oo la middoobo haddii dal shisheeya la joogo ma xuma se midnimo aan la helayn waxaynu wakhti badan ugu luminaa waa wax laga wanaagsan yahay.
Nasiib wanaag, waxa Illahay illa kulmiyay qof wanaagsan Maxamed Mawliid Xirsi oo aan qolkiisa la dagay ina siiyay waxwalba oo aan u bahnaa. Sababta aan u qoraayo qoraalkana ah caawimada laga helo qofka kaa sii horeyay inay ardayga ka caawinayso inuu dagdag ula qabsado dalka cusub iyo waayihiisa.
Maxamed intuu si daggan iila hadlay ayuu igu yidhi “Mukhtaarow waxaad samaysaa sannadka koowaad wax kale ha dhigan oo jaammacada 16 maado (Course) ee aad qadanaysid ku dadaal iskana illaali inuu imtixaan kaliyii kugu soo noqdo (Backlog) haddaad doonaysid inaad labada sanno ee loogu talo galay Master Degree ga ku dhammaysid.” Intaas igagamuu hadhin wuxuu i raaciyay ‘’Markad sannadka koowaad dhammaysid waxaad bilowdaa xiisadaha dibada laga qaato ee (Tuitions). Maalinta axadana iska ciyaar kubada haddaad haleeshid oo iska jimicso. Wayahay iyo waad mahadsan tahay baan ugu jawaabay.
Waxaan bilaabay inaan 6 illaa ka 6 ku qaato akhrinta iyo diyaarinta casharada anoo dhex fadhiya libraryga oo aan bixin jiray lacag. Waxaan la kulmay oo aanan illaawi karin inay jireen oo buxeen dad i niyad jabin jiray marwalba oo igu odhan jiray ma awoodi doontid inaad baastid imtixaanka. Waxay igu odhan jireen waxa liidata jaammacada aad ka soo baxday ee jaammacada Hargeysa oo heerka jammacadaas aad ka soo baxday ma awoodo inaad la qabsatid jaammacad u weyn sida Osmania University oo kale.
Waxaan ku dadaali jiray inaan niyada adkaysto oo aanan maqal waxa dadku akhriyayaan. Waxyaabaha igu layaabka badnaa ee aan la kulmay wuxuu ahaa in imtixaanka la galayaa uu ahaa 40 xashiyood (40 page) oo cad ayna mid kaliya wax ku qornayn iyo 15 su’aalod oo loogu dhibaayo laguguna odhanaayo kaga jawaab. Waxa waajib ahayd inaad ka wada jawaabtid adoo dalbanaaya xaashiyo dheerad ah (addition papers) taaso sii kordhinaysa tirada xaashiyaha. Iyadoo sidaas tahay ayaa waxaan dhibaato kale kala kulmay booliska oo i diiday inay i siyaan sharciga daganaan shiyaha dalka (Resident permit) madaama sharcigayga dal ku galka wax ka khaldanayeen.
Waxaan garab wanaagsan ka helay Maxamed Mawliid oo marwalba i caawin jiray si ka badan sida waajibkiisu ahaa. 5 bilood ayay igu qadatay inaan helo sharciga daganaan shiyaha dalka Hindiya. Isla wakhtigaas oo dhanna maalinwalba markan jaammacada ka yimaado 4ta galabnimo waxa i qaadi jiray Maxamed oo booliska i gayn jiray madaama ay amar igu siyeen inaan soo noqdo maalin walba iyakoo igu waday baadhitaan (Verfication). Waxay ahayd nasiib inaan helo qof i caawiya sidaas oo dhan. Dadka (Senior Students) ka ahi in badan waxay ahayeen dad nolosha ka dhacsan oo dhallinyarada soo gasha ee cusub lugta qabta kuwaas oo marwalba ka faafin jiray dacaayad iyo xumaan si ay u niyad jabaan.
Waxa aan xasuustaa dhallinyaro badan oo ku dagtay rag ka so horeeyay oo nolosha ka dhacay inay awoodi wayeen xataa inay yimadaan fasalka jaammacada iska daa inay basaan imtixaanka jaammacade. Waalid ku tabcay iyo mustaqbalkoodiiba waxa god madow ku hubsaday is xakamayn yaraantooda iyo arday ka soo horeeyay (Senior) kuwaas oo jarkay ka dhaceen mid ka dheer uga talaabsada dhallinyarada cusub.
Waxaynu ka nimid dhul iyo dad ay agtooda ceeb ka yihiin goobaha tumashada ama xumaanta lagu sameeyo. Waxaynu ka nimid dhul qofka gabadha uu xataa la sheekaysanaayo hoos hoos ula hadlo. Waxaynu ka nimid dhul hablo asturan oo marwooyin ahi jogaan. Waxaynu ka nimid dhul ka duwan dhulka wada xorriyada iyo wax celinaya midna aanu jirin. Dhallinyaro badan waxa saamayn ku yeelatay noloshaas xorriyada badan waxayna bartaan balwadaha sida, sigaarka, jaadka, khamriga, la macmiilka dumarka iyo balwado kale oo badan. Nasiib xumo ka weyn ma jirto in goobtii lagu soo diray inaad aqoon iyo cilmi ka korodhsatid aad ka korodhsatid dib u dhac iyo casharo nolol ka dhicid ah.
Waxaan yeelay taladii iyo tilmaanti Maxamed i siiyay. Waxa i suuro gashay inaan si wanaagsan iyo darajo wanaagsan ku dhammeeyo sannadkii koowaad ee jaammacada anoo faraxsana u gudbo sannadkii labaad oo 8 maado oo kaliya ahaa. Waxa aan bilaabay inaan wakhti badan u helo xiisadaha jaammacada dibadeeda laga qaato ee tuitions ka kuwaas oo kab weyn u ahaa takhasuskayga waxbarasho iyo inaanku dhiirado inaan galo imtixaano online ahaa oo lacag badan ku kacayay kuna guulaysto Illahay mahadii.
Waxaan marwalba niyada ku hayay inaan ahaa qof nasiib leh madaama dhallinyaro badan ay dhibaato kala kulmi jireen dadka ay la dagan yihiin kuwaas oo aan u caawin jirin si taam ah oo hadday dadaalan niyad jabin jiray hadday guuldaraystaana ku farxi jiray. Caawi dadka aad ka so horaysay adoo si taam ah u caawinaya uguna garab galaaya in ardayga cusub la qabsado nolosha iyo waayaha waxbarasho ee uu ku cusub yahay. Waxa laga yabaa in berrito uu caawiyo tiro badan oo arday ah isagoo ka ficil qadanaaya sidaad kaligii u caawisay.
Gabogabadii, Ilaahay waxuu inoo sheegayaa’’kuwa xaqa rumeeyow wax ka cunna wanaagaan idinku arsaqnay, kuna mahadiya Eebbe haddaad tihiin kuwo isaga caabudi’’ (Al- Baqra:172) Illaahay waxuu xusay mahadnaqa isagoo barbar dhigay Iimaan. Waxaanu caddeeyay in aanu waxba ka faa,iidayn inuu ciqaabo dadkiisa haddii ay u mahad celiyaan rumeeyaana. ’’Muxuu ku fali Eebbe cadaabkiina haddaad mahadisaan oo rumaysaan Eebbena waa mahadiye waana oge (An-nisa, 147).
Guntii, Illahay ayaa mahad leh inoo suuro galiyay inaynu awoodno inaynu dalal aan dalkeenna ahayn wax ka soo barano. Waxa mahad leh waalidka tacabka badan galiyay waxbarashadeena. Waxa mahad leh ardaydii inaga horaysay ee inagu caawisay inaynu dalalka shisheeye la qabsano noloshooda iyo waxbarashadoodaba. Waxa mudan inaynu isku caawino si wanaagsan oo habboon oo aradayga cusub ku kalifaysa inuu caawiyo ardayda ka danabysa ee iman doonta dalkaas.
Funaanada ay Man United xiran doonto xagaaga dambe oo muran ka dhalisay aduunka (Sabab)